Trano Zen Mood dia tetik'asa misy fotodrafitrasa mifototra amin'ny mpamily 3 lehibe: Minimalism, adaptability ary aesthetics. Ny fizarana tsirairay dia mifatotra amin'ny endriny isan-karazany ary ampiasaina: trano, birao na efitrano fampisehoana dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiasana endrika roa. Ny module tsirairay dia namboarina tamin'ny 3.20 x 6.00m nalamina tao amin'ny 19m² tao anatin'ny gorodona 01 na 02. Ny fitaterana no vatan'ny kamiao, ary azo alefa sy apetraka ao anatin'ny iray andro fotsiny izy io. Ny famolavolana miavaka sy maoderina izay mamorona sehatra tsotra sy marim-pototra ary azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fomba fanamboarana madio sy matihanina.
Talata 24 Aogositra 2021
Trano Ny fitaomam-panahy ny tranombakoka dia avy amin'ny hazo eokalyptus naverina indray ilay "bateas". Ireto ny sehatra famokarana taretra ao amin'ny faritany ary izy no mandrafitra ny indostrian'ny toerana eto an-toerana ao "Ria da Arousa", Espana. Eucalyptus hazo no ampiasaina ao amin'ireo sehatra ireo, ary misy fanitarana an'io hazo io ao amin'ny faritra. Ny taonan'ny kitay dia tsy nafenina azy, ary ny endrika ivelany sy ivelany anatiny dia vitaina ny famoronana fihetseham-po samihafa. Ny trano dia manandrana mindrana ny fomba amam-panao amin'ny manodidina ary manambara azy ireo amin'ny alàlan'ny tantara voalaza ao amin'ny famolavolana sy ny antsipirihany.
Ny Trano Fisakafoanana
Alatsinainy 23 Aogositra 2021
Ny Trano Fisakafoanana Ny fidirana dia paramed misy ireo fitaovana sy rafitra ary loko. Ny faritra fandraisana dia sehatra fampiononana milamina. Ny modely mampientam-po dia mifanena amin'ny haingo mahafinaritra. Ny ao ambadika dia faritra bara mavitrika ao anatin'ny toe-javatra fitsaharana. Ny toetran'ny sinoa nentim-paharazana Hui modely tariby izay nitondra jiro miampy fahatsapana ho futurism. Ilay efitra fisakafoanana voaravaka dia tsara tarehy. Voaravaka sary sarin-javamaniry, hazo trondro, sary fitaratra miloko ary jiro Baizi taloha.
Alahady 22 Aogositra 2021
Asabotsy 21 Aogositra 2021
Ny Efitrano Fampirantiana
Zoma 20 Aogositra 2021
Ny Efitrano Fampirantiana Avy amin'ny maritrano ny tanàna ka hatramin'ny index hahalala sy handanjalanja ny fandanjalanjana ny endrika, ny fanehoan-kevitr'ilay tanàna dia nanjary tamin'ny zoro telo, tamin'ny alàlan'ny fananganana sy fampandrosoana ho an'ny tanàna mba hampiroboroboana ny orinasa, ny fomba fijerin'ny tanàna sy ny olona ny fanovana ny tanàna sy ny toetran'ny tanàna ary ny tanàn-dehibe fiakaran'ny toetrandro ho fifanakalozana hanehoana ny fahalalan'ny mpamolavola tanàna iray, jereo bebe kokoa ny lasa ny tanàna hahitanao ny hoaviny.
Calendar 2014 “Town” Kalandrie Asabotsy 18 Septambra
Artificial Topography Ny Topografika Artifisialy Zoma 17 Septambra
Conspiracy - Sandal shaped jewels- Kiraro Lafo Alakamisy 16 Septambra
Trano Trano Ny Trano Fisakafoanana Ny Toerana Fivarotana Ny Fiaraha-Monina Sy Ny Fialam-Boly Ny Efitrano Fampirantiana